जीपी फाउण्डेशन कप फूटबलमा धनुषाको विजयी सुरुवात जीपी फाउण्डेशन कप फूटबलमा धनुषाको विजयी सुरुवात Esimana.com || Simana Media Pvt. Ltd.
जीपी फाउण्डेशन कप फूटबलमा धनुषाको विजयी सुरुवात
क्रिकेटमा केआईइसी र सिंह ११ लायन्स विजयी
2/1/2020 गते 00 00 मा प्रकाशित 668 पटक पढिएको
वीरगन्ज, १९ माघ । वीरगन्जमा शनिबारदेखि शुरु भएको जी.पी. कप पूmटबल प्रतियोगितामा धनुषाले विजयी सुरुवात गरेको । गिरिजा प्रसाद कोईराला फाउण्डेशन पर्साले आयोजना गरेको प्रदेश २ स्तरीय पूmटबल प्रतियोगिताको उदघाटन खेलमा पर्सा पूmटबल संघलाई पराजित गरी धनुषा पूmटबल संघ विजयी भएको हो ।
निर्धारित ९० मिनेटको खेल बराबरीमा रोकिएपछि पेनाल्टी सुटआउटबाट खेलको नतिजा निकालिएको थियो । पेनाल्टी सुटआउटमा धनुषा ४–२ ले विजयी भएको हो । पर्साका खेलाडीले पाएको पहिलो पेनाल्टीमा जर्सी नम्बर ४ का आशिष ताम्राकार र जर्सी नम्बर १० का सुनिल गुरुङले गोल गर्न चुकेपछि खेलको नतिजा धनुषाको पक्षमा गएको हो ।
यसअघि प्रतियोगिताको उदघाटन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले गरेका थिए । गिरिजा प्रसाद कोईराला फाउण्डेशनका अध्यक्ष मोहम्मद सहाबुद्दीनको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । आईतबार महोत्तरी फुटबल संघ र रौतहट पूmटबल संघबीच खेल हुनेछ ।
वीरगन्जमा जारी वीरगन्ज प्रिमियर टि–ट्वाण्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा सिंह–११ लायन्स वीरगन्ज र केआईइसी वीरगन्ज विजयी भएका छन् । नारायणी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सिंह–११ लायन्सले रौतहट राईनोजलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो ।
रौतहट राईनोजले दिएको ९३ रनको लक्ष्य तीन विकेटकै क्षतिमा पूरा गरेपछि खेल सिंह ११ लायन्सले जितेको हो । त्यस्तै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा केआइइसी वीरगन्ज ५ विकेटले विजयी भएको छ । वीरगन्ज स्टारले बनाएको ९६ रनको योगफल केआईइसीले ५ विकेटको नोक्सानीमा पूरा गरेर भेट्टाएको हो ।
वीरगन्ज स्टार र केआईइसीबीचको खेलको म्यान अफ दी म्याच आदिल अन्सारी भएका छन् ।
सिंह–११ र रौतहट राईनोजबीच भएको खेलमा ३ विकेट र ३४ रन बनाएको महबुब आलम म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन् ।